Rattan Lamp, Woven Lamp Shade, Bamboo Lamp - Xinsanxing Ukukhanyisa
Ohola Umkhiqizi we Rattan / Bamboo Lamp EChina
Ukwaluka kukaRattan, okwaqala eChina eminyakeni engaphezu kwenkulungwane edlule, kunemininingwane ecebile yobuntu. Isikhathi eside, ukukhanya kwe-XSX bekuhlale kufuna ukusebenzisa uqalo wemvelo, i-rattan, i-wicker nezinye izinto zemvelo ukwenza amalambu ngokuluka ngesandla.Ngenxa yokuthi lezi zinto azisihle kuphela, kodwa futhi zihlala isikhathi eside - zemvelo, ezinobungani bemvelo, zilula, inhlanganisela ephelele yenduduzo nokusebenziseka kwemvelo, okusebenzayo, ubuciko kokukodwa, ulethe isitayela sasekhaya sanamuhla ngesitayela semvelo yasemaphandleni. Isizinda sethu sokukhiqiza siseGuangxi, eChina, lapho isiko lokweluka linomlando omude wefa, futhi kunenqwaba yabanekhono lokweluka ifa lezingcweti.Usebenzisa umvini wasendle, uqalo, willow nezinye izitshalo zemvelo ezikhulayo njengezinto zokwakha, inhlanganisela ephelele yokwaluka kwakudala Amasu kanye nokwakhiwa kwanamuhla kuveza ngesibindi isifiso sokusondela emvelweni. Ngokukhanya kwesibani ne-rattan bamboo kwakha umsebenzi wezandla onobungqabavu bemvelo ......
Ukwaluka kweRattan kungumsebenzi wezandla owelukiwe nomkhiqizo osebenzayo owenziwe ngesikhumba kanye nomgogodla weziqu ze-rattan. I-Rattan uhlobo lomvini olunokuthungwa okunzima nomzimba omude ngokwedlulele; isikhumba sayo sangaphandle sibushelelezi ngombala, sibushelelezi esandleni, siqine kakhulu, futhi siyafana Kunama-slurs, sibizwa ngokuthi ama-rattan slabs, okuyinto enhle yokwaluka yemvelo. Izibani zansuku zonke ezifana nezibani zethebula le-rattan, amalambu aphansi e-rattan, izigaxa ze-rattan, njll. Ezenziwe ngamalambu e-XINSANXING zihle kakhulu kubuciko, zihlukahlukene ngokuhlukahluka futhi zihlala isikhathi eside, futhi zithandwa kakhulu ngabathengi.
Ama-Rattan asetshenziselwa kakhulu isibani.Uma unqunywe ezingxenyeni, i-rattan ingasetshenziswa njengokhuni lokwenza isibani.I-Rattan yamukela upende namabala njengezinye izinhlobo eziningi zokhuni, ngakho-ke itholakala ngemibala eminingi, futhi ingasebenza ngezitayela eziningi I-Rattan yinto enhle kakhulu, ikakhulukazi ngoba ayisindi, ihlala isikhathi eside, futhi, ngokwezinga elithile, iyaguquguquka futhi ilungele ukusetshenziswa kwesibani.
Uqalo luqinile futhi luyaguquguquka kunezinkuni eziningi, njengoba lunezintambo ezinde. Ingakhula ifike kumitha elilodwa ngosuku futhi ikhiqize umoya-mpilo ophindwe kabili uma kuqhathaniswa nezinye izinhlobo zezinkuni. Uqalo olusetshenziswa yiXINSANXING selulungele ukuvunwa ngemuva kweminyaka engu-4-6. Ubambo utshani, hhayi isihlahla, futhi abudingi ukutshalwa kabusha. Aligcini ngokukhula njengotshani, kodwa lisabalala njengotshani.
I-Rattan Lamp efakiwe
Letha ukubukeka okuhlukile kogu kokuhlobisa kwakho kwasekhaya nge-Rattan Weave Lamp evela eXINSANXING. Lezi zibani ze-rattan ziyisengezo esikhanyayo nomaphi lapho sithinta khona, kusuka ephaseji elikhulu kuya egumbini lakho lokuphumula noma kufundwa i-nook.
Rattan ilenga zalapho ukukhanya, Southeast Asia Ho ...
Nokwelukiweyo elengayo isibani, Southeast Asia ngezifiso ...
Ukukhanya okumnyama kwe-rattan pendant, i-rattan elula emnyama ...
I-Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd. itholakala eHuizhou City, esifundazweni saseGuangdong, eChina. Yaqalwa ngo-2007, kuba ifektri inhlangano onguchwepheshe ukucubungula nokukhiqizaIzindwangu ze-rattan,Isibani se-rattan floor,isibani setafula le-rattan, isibani saphansi soqalo,bamboo elengayo ukukhanya,bamboo ithebula isibani. Iba neqembu eliphelele le-R & D nohlelo lokuphathwa kwekhwalithi yesayensi. Nge-resin, i-iron, i-bamboo ne-rattan, izinkuni, amapayipi amanzi nezinye izinto zemvelo njengezinto zokusetshenziswa, ngomhlangano owenziwe ngezifiso nowokucubungula, ubuncane besimanje, i-retro yaseMelika, ubuciko bemvelo nezinye izitayela ezahlukahlukene zamalambu nemikhiqizo yezibani zenzelwe ukuhlangabezana nezinto ezahlukahlukene Izimfuno zemakethe. Imikhiqizo ithunyelwa eYurophu, eMelika, eMpumalanga Ephakathi, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe kanye nasezifundeni, futhi inqobile ukusekelwa nokuqinisekiswa kwamakhasimende aphesheya kwezilwandle ngezitayela zamanoveli nezinhlobonhlobo, amanani entengo kanye nensizakalo enhle kakhulu.
Ngokwezifiso, Abahlinzeki, Imikhiqizo Yezintambo ze-Rattan Wholesale
Udinga usizo olwengeziwe ukuthola isibani esithandwa kakhulu se-bamboo? Uzothola isibani se-bamboo esithengisa kakhulu ku-XINSANXING! Kusuka enhlobonhlobo yamalambu oqalo wekhwalithi kuya ekukhetheni okungabizi, i-XINSANXING izokusiza ukuthi uthole isibani esihle kakhulu se-bamboo, noma ngabe isabelomali sakho siyini. , siphinde sithengise, sithengise futhi senze eminye imikhiqizo ekhanyayo ye-rattan, ngokwesibonelo, i-Basket Pendant Light, i-Rattan Floor Lamp, i-Rattan Table light, njll. Ngibonise ukuthi ucabangani, Xhumana nathi manje!
Uqalo ilenga lwemidlalo, Creative ekhaya ligh ...
Izibani zoqalo, isitayela se-Southeast Asia bam ...
Ubambo lokukhanyisa elengayo, i-Nordic bamboo yesimanje ...
Ubambo pendant ukukhanya, Creative ubuntu chand ...
Isibani esilenga u-bamboo, Ubumba we-bamboo olula okhanyayo ...
Izibani ezilengiswa ngoqalo, i-bamboo ephothiwe yokudala ...
I-bamboo elengayo, Izibani zesigqoko ezenziwe ngezifiso | X ...
Bheka ibhulogi yethu ukuthola izitayela zakamuva, amathiphu, izeluleko nogqozi.
Ukucubungula ukuthi umhlanga waluka isenzo sesibani ...
I-Cany yakha isibani sokwenza indima yobuciko sijwayele kakhulu, ngesikhathi esingenayo i-air conditioning, ama-cany amaningi enza izimpahla ukuvumela lonke ihlobo ukuthi libonakale lipholile futhi lihle ...
Ukwaluka kwesibani se-bamboo rattan | XINSA ...
Uhlaka lwe-bamboo rattan ludlala indima ngezinto zalo zemvelo luyinto esezingeni elifanele, ulayini oqephuzayo, isigqi sokuthi ama-braids athola ukuthandwa umhlaba kabusha.Noma kusekhaya, noma emahhotela, c ...
Ukuvela koloba lokweluka | XINSANXING
Umhlobiso wesibani se-bamboo unezitayela ezahlukahlukene, kepha uyazi ukuthi ukwelukwa kwesibani soqalo? Izindlela ezahlukahlukene zokweluka amaphethini wokuluka nazo zihlukile, isitayela sokweluka sikhiqizwa ngokuya ...
Ikhwalithi yomkhiqizo inesitifiketi sokuhlolwa kwekhwalithi esezingeni eliphakeme lomkhakha, ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme.